Iwo akanakisa mabhuku ekupa ino Kisimusi, iwo manyowani awanga uchitsvaga | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku akanakisa ekupa Kisimusi ino
John Ortiz | | Vanyori, Type, Mabhuku, Novela, Nhema nhema
Mabhuku akanakisa ekupa paKisimusi.
Kupa bhuku rakanaka inzira yakangwara yekuratidza rudo nekuonga munhu waunoda. Uye zvakare, inomiririra chisingakanganwike chipo cheKisimusi, chinokwanisa kukudziridza fungidziro yeiye anotambira, kunyanya kana iine nyaya izere nekukanganisa kunokanganisa kunovimbisa kuverenga kunonakidza, kupindwa muropa uye kunovaka muviri.
Ichi chinyorwa chinopa ongororo yegumi inofanirwa-kuona zvinyorwa muSpanish, yavo mareferenzi pamusoro pemunyori, technical ma sheet uye ruzivo rwekutenga rwunosanganisirwa. Iwo mabasa ndeevanyori vakakurumbira saDolores Redondo, Carlos Montero, Emilio Bueso naJavier Cercas, kungodoma vashoma. Dzakadzidza idzi dzine hunhu hwakajairika: kunge wakakwanisa kudarika nepakati nharo dzakagadzirwa nemaitiro chaiwo.
1 Terra alta naJavier Cercas (Planeta Mubairo 2019)
1.1 Nezve inoverengeka
1.2 Munyori bio
1.3 Hunhu hwebhuku
2 Iko kuchamhembe kumeso kwemoyo (Áncora & Delfin) naDolores Aredondo
2.1 Nezve inoverengeka
2.2 Biography yemunyori
2.3 Hunhu hwebhuku
3 Kubvisa Mhosva Yakakwana: 4 (SinFicción) naMayka Navarro
3.1 Nezve inoverengeka
3.2 Biography yemunyori
3.3 Hunhu hwebhuku
4 Valkyries: Iwo Vanasikana vekuchamhembe (Nhoroondo Nhoroondo) naIñaki Biggi
4.1 Nezve inoverengeka
4.3 Hunhu hwebhuku
5 Anoshamisa maAeons (Insomnia) naEmilio Bueso
5.1 Nezve inoverengeka
5.2 Munyori bio
5.3 Hunhu hwebhuku
6 Alegría de Manuel Vilas: 2019 Planeta Mubairo Wokupedzisira
6.1 Nezve inoverengeka
6.2 Munyori bio
6.3 Hunhu hwebhuku
7 Vanasikana veKaputeni weMaría Dueñas (María Dueñas Library)
7.1 Nezve inoverengeka
7.2 Biography yemunyori
7.3 Hunhu hwebasa
8 Angela Becerra Rimwe Zuva Nhasi: Fernando Lara Novel Mubairo 2019
8.1 Nezve inoverengeka
8.2 Biography yemunyori
8.3 Hunhu hwebhuku
9 Isingaonekwe naEloy Moreno (Ink Cloud)
9.1 Nezve inoverengeka
9.2 Munyori bio
9.3 Hunhu hwebhuku
10 Sango Rinoziva Zita Rako naAlaitz Laceaga (Great Novels)
10.1 Nezve inoverengeka
10.2 Biography yemunyori
10.3 Hunhu hwebhuku
11 Kunze naJesús Carrasco (NF Novela)
11.1 Munyori bio
11.2 Hunhu hwebhuku
12 Dambudziko raunosiya naCarlos Montero: Primavera de Novela Mubairo 2016
12.1 Munyori bio
12.2 Hunhu hwebhuku
High Terra naJavier Cercas (Planeta Mubairo 2019)
Iyo zano inoitika munzvimbo inowanzo runyararo yeTerra Alta, inozununguswa nemhosva inotyisa. Ikoko, mitumbi yevaridzi veGráficas Adell (kambani hombe munzvimbo iyi) inowanikwa isina hupenyu nezviratidzo zvakajeka zvekutambudzwa kunotyisa.
Kuti aongorore chokwadi, Melchor Marín, mupurisa wechidiki akasvika achibva kuBarcelona. Makore mana apfuura, ndiani anotora basa rekugadzirisa nyaya iyi. Nenzira imwecheteyo, iye anoshingaira kuverenga anove nehupenyu hunofadza hwezuva nezuva semurume weguta raibhurari uye baba vemusikana, Cosette (akafanana nemwanasikana waJean Valjean, protagonist weLes Miserables, bhuku rake raanofarira). Nekudaro, pasi peiyo runyararo rwunoonekwa anoviga rima rakapfuura iro rakamushandura kuita ngano yemuviri.
Kujekeswa kwemhondi kunokonzeresa akateedzana ezviitiko zvine hupenyu, isingatarisirwe uye izere nevanhu vane mukurumbira. Iyo nharo ine chiratidzo chakajeka kwazvo pakuwongorora kwemutemo, kururamisira kweruramisiro uye kana paine hwaro hunogamuchirwa hwetsika kururamisa kutsiva.
Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, Spain 1962) munyori ane ruzivo. Akanyora basa rakaturikirwa mumitauro inodarika makumi matatu uyezve akagadzira enhau dzekuhwina mubairo wepasi rose uye wepasi rose, pakati padzo pane Inotakurika, Dumbu rehove, Varwi veSalamis, Anatomy yechinguva, Mitemo yemuganho y Munyengeri.
Saizvozvowo, yakaburitsa mabhuku akasiyana siyana -Mwaka wakanaka, Nhau dzechokwadi, Chokwadi cheAgamemnon y Nzira dzekuhwanda- pamwe nezvinyorwa (Basa rekunyora raGonzalo Suárez y Bofu nzvimbo).
Uyezve, akapihwa mibairo yakasiyana yezvinyorwa, utapi venhau uye rake basa rehunyanzvi sePrix Ulysse (France), iyo Premio Internazionale del Salone del Libro di Torino, iyo Premio Friuladria, iyo Premio Internazionale Città di Vigevano, kana Premio Sicilia, aya mana ekupedzisira muItari.
Kavha yakaoma: Mapeji 384
Editor: Dhizaina Planeta
Shanduro: 1 (Mbudzi 5, 2019)
Unogona kuitenga pano: High Terra
Chiso chekuchamhembe chemoyo (Orancora & Delfin) NaDolores Aredondo
Chiso chekuchamhembe chemoyo.
Iri bhuku prequel kune iyo Baztán trilogy. Inodzokera muna Nyamavhuvhu 2005. Zvese zvinoitika nguva refu pamberi pehumhondi hwakazunza mupata weBaztán. Munguva ino yenguva, Amaia Salazar, makumi maviri nemashanu, mutevedzeri wevatariri veProvince Mapurisa, ari muUnited States achitora chikamu mukuchinjana kosi pakati peEuropol neFBI. Kudzidziswa uku kunopihwa naAloisius Dupree, mukuru wechikwata chekuferefeta. Izvo zvinodikanwa kuti uzive kuti Amaia ndeimwe yeiyo vanonyanya kutaurwa protagonists ematsotsi emhando yemhando.
Chimwe chebvunzo chinoda kugadzirisa nyaya chaiyo yemhondi yekupedzisira inonzi "munyori." Iyo modus operandi yeiyi malefactor kurwisa mhuri dzese, ichisiya zviitiko zvematsotsi zvinoita senge tsika.
Zvisingatarisirwi, Salazar anova nhengo yechikwata chekuferefeta chinotamira kuNew Orleans. Zvese zvinhu zvinoitika pamberi pedutu rakaipisisa munhoroondo yaro kuitira kutarisira mhondi. Ipapo, kufona kubva kuna mainini Engrasi vanobva kuBasque Nyika kunounza zvipoko zvehucheche zveAmaia, zvichimumanikidza kutarisana nekutya kwake kwakadzika uye ndangariro idzo dzakamupa nzwisiso inoshamisa kuchamhembe kwechiso chemoyo.
Dolores Redondo (Donostia-San Sebastián, Spain, 1969) ndiye muvambi weiye anozivikanwa Baztán trilogy, chiitiko chekunyora icho chakawana miriyoni nehafu vasina kuverenga. Uye zvakare, panguva ye2016 akagashira iyo Planeta Mubairo we Zvese izvi ndichakupa.
Parizvino, yasvika kuhuwandu hunoshamisa hwevaparidzi makumi matatu nevatanhatu vakaburitsa mazita ayo. Kwete pasina, Muchengeti asingaoneki - Chekutanga chikamu cheiyo trilogy- yakashandisirwa bhaisikopo muna2017 uye mafirimu maficha eaya mamwe mavhoriyamu maviri eiyo trilogy iri kuda kuburitswa munguva pfupi inotevera: Nhaka mumapfupa y Kupa dutu, Zvese izvi ndichakupa.
Kavha yakaoma: Mapeji 688
Editor: Destino Editions
Shanduro: 1 (Gumiguru 1, 2019)
Unganidzo: Ancora & Delfin
Unogona kuitenga pano: Chiso chekuchamhembe chemoyo
Kubvisa mhosva yakakwana: 4 (Hapana Ngano)naMayka Navarro
Kubvisa mhosva yakakwana.
Kubva pane izvo chaizvo zvipupuriro zvemitezo yeMossos d'Esquadra, iri basa rinotsanangura nyaya yaAna María Páez Capital. Aive mukadzi akaurayiwa munharaunda yeGràcia muBarcelona, ​​ane zita rakaburitswa muchirongwa chekunyengera uye kubiridzira kwebhangi kwakaitwa naMaría Ángeles Molina Fernández, "Angi", uyo akatora kuzivikanwa kweshamwari yakaurayiwa kuti aite zvakaipa zvake.
Mushure memwedzi yekungwarira uye kunyatsoongorora, mapurisa akakwanisa kubvisa "mhosva yakakwana" yakarongedzwa naMolina Fernández. Rondedzero inoitwa nemutori wenhau uyo ​​akaburitsa zviitiko zvechokwadi zvekuferefeta uye akange oda kupiwa mutongi nemutongi wenyaya.
Mayka Navarro (Badalona, ​​Spain, Chikunguru 1968) mutori wenhau akashanda mumhando dzakasiyana dzekudhinda Chemhondoro Pepanhau reCatalonia y La Vanguardia. Akatorawo nyaya dzenhau dzinorarama nezvirongwa zveterevhizheni paTele 5 neTV3, uye mu Iye suplement yeCatalunya Ràdio.
Pabutiro munyoro: Mapeji 312
Shanduro: 1 (Gunyana 30, 2019)
Unogona kuitenga pano: Kubvisa mhosva yakakwana
Valkyries: Vanasikana vekuchamhembe (Nhoroondo Dzenhoroondo) naIñaki Biggi
Valkyries: vanasikana vekuchamhembe.
Gore 859 AD, Seville anopupurira kuyedza kupamba nechikepe cheViking chisingaite chinangwa chayo. Nekudaro, varwi vekuchamhembe vanotorwa nagavhuna weguta, uyo anoda muripo wakakura kuti vasunungurwe. Kana nhau idzi dzasvika pamusha wevapambi, vakadzi vacho vanosarudza kuhaya vashoma vemauto kuti vavadzidzise muhunyanzvi hwekurwa.
Mushure megore rekudzidziswa, iro basa rinoratidzika kunge risingabviri rekununura vekwavo rinotanga. Kunyangwe paine zviitiko zvakawanda zvisingafanoonekwe uye zvipingaidzo zvakaitika pakutanga kwerwendo, varwi vakakwanisa kusvika kuguta guru reAndalusian. Mune ino novel, munyori anoratidza kugona kwakanyanya kurondedzera kuratidza munhu wevanhu, akashinga uye anotyisa divi rebudiriro yakajeka.
Nzira yakanakisa yekuziva nezve Iñaki Biggi, ndeyekuverenga iyi bvunzurudzo.
Kavha yakaoma: Mapeji 576
Editor: Editora y Distribuidora Hispano Americana, SA
Shanduro: 1 (Kubvumbi 23, 2018)
Unganidzo: Nhoroondo Nhoroondo
Unogona kuitenga pano: Valkyries: Vanasikana vekuchamhembe
Aeons Anoshamisa (Kusuruvara) naEmilio Bueso
Zvakare, Emilio Bueso anonakidza nenyaya inoshungurudza sezvo iri muropa. Mubasa iri mune kurangana kwekuparadza nyika zvichibva pauporofita hweCthulhu Mythos. Iyo rongero inotungamira kumusangano wekiyi yakavanzika yesirivheri muBarcelona, ​​munzira yemotokari iri pamuganho wechikonzero uye kusangana nevasuruvaro vashanu vasingaregi pachavo pamberi penyonganiso nekuparadzwa kwekupedzisira. Zvingave sei zvikasadaro, mukuvandudzwa kwenyaya iyi pane akawanda anotyisa mifananidzo akakwenenzverwa kwazvo, akatakurwa nemifananidzo inotyisa.
Akazvarwa muCastellón, Spain, muna 1974, Emilio Bueso ndiye injinjini yehurongwa Iva munyori anozivikanwa nekuda kwekusviba kwake kwechokwadi uye yakasarudzika rondedzero yemanhamba ake anotyisa. Zvinyorwa zvake zvinotangira pane zvakajairika mweya mweya (Yakavharwa husiku, 2007), kuenda kuburikidza nechiratidzo nezve apocalypse isina mafuta ezve fossil (Zenith, 2012), kune yekumadokero -style biological denda rinonakidza (Manheru ano denga richapisa, 2013), pakati pevamwe.
Kavha yakaoma: Mapeji 288
Shanduro: 1 (Chivabvu 7, 2014)
Unganidzo: kutadza kurara
Unogona kuitenga pano: Aeons Anoshamisa
Mufaro NaManuel Vilas: 2019 Planeta Mubairo Wokupedzisira
Mubhuku rino, munyori anotikoka kuti tifunge nezve basa remunhu mumwe nemumwe muchizvarwa chake uye mundangariro dzerudzi rwenyika.. Iyo zano rinotarisa kujekesa dambudziko rakatorwa mukubudirira kwekunze kwekunze kunokonzerwa nembiri, zvinopesana nekusurukirwa mukati uye kutsvaga kwechokwadi chemukati.
Iye protagonist anotarisana nemamiriro ezvinhu akasiyana sekufa kwevabereki vake, kurambana uye kujairana nekugara nemukadzi mutsva. Aya mamiriro anomutungamira kuti anzwisise kukosha kwakakosha kwevana vake muhupenyu hwake. Mukukudziridzwa kwezviitiko, kutendeseka pachako uye nevamwe kunoonekwa sehunhu hwakakosha kushuvira kuwana mufaro.
Manuel Vilas (Barbastro, Spain, 1962) akapedza kudzidza kubva kuYunivhesiti yeZaragoza aine degree muSpanish Philology.. Nhetembo yake yakasikwa inosanganisira zvinyorwa zvinozivikanwa, pakati pazvo zvatinogona kutaura Kudenga (2000), Kalori (2008) uye Kupunzika (2015), pakati pevamwe; Saizvozvo, mubhuku rake rerondedzero, mazita akadai se España (2008), Asingafi y Zvipembere mazana manomwe emamiriyoni (2015).
Saizvozvo, Vilas anogara achipa ku Iyo Herald yeAragon, El Mundo, La Vanguardia, Nyika y ABC. Hunhu hwehupenyu uye hwekushungurudzika hunhu hwakajairika hwezvaakanyora, pamwe chete nemitambo iripo sekufamba kwenguva, kugamuchirwa kwekurasikirwa kana kusurukirwa.
Kavha yakaoma:Mapeji 360
Unogona kuitenga pano: Mufaro
Vanasikana vaCaptain naMaría Dueñas (María Dueñas Library)
Zano iri ndere hupenyu hwehanzvadzi nhatu mumakore makumi maviri vane hunhu hwakasimba (Victoria, Mona naLuz Arenas). Vanofanira kurwisana pakati pezvikwiriso, zvipingamupinyi, vanhu venyika uye zvishuwo kuti vazadzise zviroto zvavo muNew York. Vasikana vakauya kuguta guru iri muna 1936 kubva kuSpain vakamanikidzwa nababa vavo, El Capitan, avo vanofanirwa kubata matare apo vachigadzirisa kuunganidzwa kwemuripo wemvura mushure mekufa netsaona kwaEmilio Arenas, waaishandira zvisina basa.
María Dueñas anoratidza mubhuku iri rinofambisa uye riri nyore kuverenga mamiriro akashata anobatanidzwa mukuva mutami. Izvi, sezvo zvichingogara zvinoda hombe dhosi yekutsunga kusiya chiitiko chine epic zvirevo uye remangwana risina chokwadi. Munyori anobhadhara ruremekedzo kuushingi hwevakadzi vanofanirwa kusangana nematambudziko mukati memamiriro ezvinhu asina kunaka.
María Dueñas akazvarwa muna 1964 muPuertollano, Ciudad Real. Akagamuchira degree rake reUchiremba muChirungu Philology uye mushure mekupedza makumi maviri emakore achipedza kudzidziswa kwake, akaburitsa Iyo nguva iri pakati pemaseams (2009), runyorwa rwakawana budiriro huru yekupepeta, kusvika padanho rekuti rakashandurwa kuterevhizheni naAntena 3, ichiva kubudirira kwevateereri uye kuwana mibairo mizhinji.
Gare gare, akaenderera mberi kuwana kuverenga nekushoropodza kwekunyora pamwe Mision Kanganwa (2012) uye Kudzikama (2015). Vanasikana vaCaptain ndiyo nganonyorwa yake ichangoburwa, yechina. Pamwe chete, mabasa aDieñas akashandurirwa mumitauro inodarika makumi matatu nemashanu uye mamirioni ezvinyorwa zvakamutengesa zvinomuisa semumwe wevanyori vanonyanya kuzivikanwa muSpain neLatin America.
Pabutiro munyoro: Mapeji 624
Shanduro: 01 (Chikunguru 2, 2019)
Unganidzo: Maria Dueñas Raibhurari
Unogona kuitenga pano: Vanasikana vaCaptain
Rimwe zuva nhasi na Ángela Becerra: 2019 Fernando Lara Novel Mubairo
Rimwe zuva, nhasi.
Bhatishebha mucheche mwana akazvarwa pahusiku hunotyisa munzvimbo dzine madhaka. Kunyangwe aine zvese zvinopesana naye, akakomborerwa nesimba rechikadzi rinodiwa kukunda chero zvipingamupinyi zvinouya nenzira yake. Vanomuziva nekuda kwekubatana kwake kusingaputsike neCapitolina, musikana ane nhamo akapfuma anova hanzvadzi yake yemukaka uye maziso anopisa ane mashiripiti emashiripiti asingamboonekwe.
Rimwe zuva nhasi yakavakirwa pane chiitiko chaicho chakaitika muColombia muna 1920apo Betsabé Espinal, musikana ane makore makumi maviri nematatu ane makore makumi matatu nematatu, anotora hushingi hutungamiriri hweimwe yekuramwa kwekutanga kwevakadzi. Mune rino bhuku, munyori anoita mutero kune hwakanyanya hushamwari hushamwari uye anopa nyaya inoshamisa yedenderedzwa rerudo rakatenderedza protagonists varo.
Ángela Becerra chizvarwa cheCali, Colombia; Kumusha kwake akadzidza Kutaurirana. Akave wekugadzira mutevedzeri wemutungamiri weimwe yemasangano ane mukurumbira muSpain, zvisinei, muna 2000 akafunga kusiya basa rake rakabudirira kumashure kuti ave munyori, iye wechokwadi shungu huru.
Gore rakatevera pakanga paine kuvhurwa kwe Vhura mweya, muunganidzwa wakakurisa wenhetembo pamusoro pematambudziko anoitika panguva yekukura kwevanhu. Nhoroondo yake yekutanga, Zve rudo zvaramba (2003), yakamuwanira iye 2004 Latin Literary Award kubva kune akakurumbira Chicago Book Fair, pamwe nekuongororwa kwakanakisa nevanoongorora uye kugamuchirwa kunoshamisa pakati pevaverengi veLatin America.
Akadzokorora mubairo uyu muna 2006 pamwe ne2005 Azorín Novel Award uye 2005 Best Colombian Fiction Book Award na Kurota kwekupedzisira (2005), kuburitswa kwekuzvitsaurira kwake semunyori wenhau. Mumakore akatevera akapedza mamwe mabhuku ane mukurumbira, pakati payo ari Ndeipi nguva isipo (2007), Iye, uyo aive nazvo zvese (2009) y Memoiridzo yechinomwe-soled scoundrel (2013).
Kavha yakaoma: Mapeji 816
Editor: Yakagadziriswa Planeta (Chivabvu 21, 2019)
Unganidzo: Spanish neIbero -American Vanyori
Unogona kuitenga pano: Rimwe zuva nhasi
Invisible neEloy Moreno (Ink Cloud)
Iri ibhuku rinotarisa kwazvo. Inoongorora kupokana kunogadzirwa panguva yehucheche nemhando dzakasiyana dzepfungwa dzinogona kutungamira chero munhu kuti ade kutsakatika pavanonzwa kucherechedzwa nevamwe vozoenda kune kumwe kunyanyisa kwekuda kuonekwa kana vachinzwa kusaonekwa. Kune muverengi zvakaoma kuti zvirege kuratidzwa mune chero zvikamu zvemavara.
Eloy Moreno (Castellón, Spain, 1976) akabuda semunyori kubvira kuzvishambadza kwe Iyo green gel peni - Ruzivo rwake rwekutanga- zita rinopfuura mazana maviri ezviuru zvakatengeswa. Munyori aiziva kuchengetedza huwandu hwehunhu, hoko muvateveri vake uye mukurumbira pakati pevatsoropodzi vezvinyorwa nekuburitswa kwake kunotevera: Zvandakawana pasi pasofa (2013), Chipo (2015), Invisible (2018) uye Nyaya dzekunzwisisa nyika (akateedzana mavhoriyamu matatu, kusvika nhasi, akatanga muna 2015), iyo yekupedzisira yakanangana neruzhinji, kunyangwe kuverenga kwayo kwakabatanidzwa mumasangano akati wandei edzidzo.
Pabutiro munyoro: Mapeji 304
Editor: Ink Ink
Shanduro: 001 (Kukadzi 1, 2018)
Unganidzo: Ink Ink
Unogona kuitenga pano: Invisible
Sango rinoziva zita rako naAlaitz Laceaga (Great Novels)
Iyo nyaya ine zvese zvinhu zvekuverenga kunonakidza: rudo, kunyengera, godo, kurwadziwa uye kutsiva. Inowanikwa pakupera kwema1920, apo Estrella naAlma (hanzvadzi yake mapatya) vakararama kubwinya kwehupenyu hwepamusoro sevanasikana veMarquises yeZuloaga, mhuri ine mugodhi wesimbi.
Asi hupenyu hwavo hwoumbozha hunovanza chakavanzika chinovashungurudza: Nekuda kwekutukwa kusingazivikanwe kwavakagara nhaka, mumwe wehanzvadzi mbiri achafa asati asvika makore gumi nemashanu ekuberekwa. Muchirevo chechinyorwa chino, kusimudzira rangano kunotanga, izvo zvinozotungamira protagonist kuzvitora semukadzi ane hushingi uye asingakanganwike, asingatarise tsika dzemagariro ehunhu uye akatsunga kuchengetedza nhaka yemhuri yake.
Akazvarwa muBilbao muna 1982, Alaitz Laceaga ndiye anofarira maficha eVictorian, anotyisa uye akateedzana emhuri.. Basa rake rekunyora rakatanga nekuburitswa kwenyaya dzinoverengeka pfupi pamapeji eInternet, anopfuura makumi matanhatu ezviuru zvekushanyirwa uye nemifungo yakawanda isingaverengeke. Nekudaro, akafunga kuburitsa zvinyorwa zvake zvekutanga (zvakanyatsogamuchirwa neruzhinji nevatsoropodzi): Sango rinoziva zita rako y Vanasikana venyika.
Kavha yakaoma: Mapeji 632
Editor: B (Editions B)
Shanduro: 001 (Chivabvu 24, 2018)
Unganidzo: Nhau huru
Unogona kuitenga pano: Sango rinoziva zita rako
Outdoor naJesús Carrasco (NF Novela)
Tiri kutarisana neicho chaichoicho, nyika yakanyura mune kusanaya kwemvura uye mune zvisirizvo hurumende inozivikanwa. Iye protagonist mwana uyo anofanirwa kutsvaga nzira yekurarama mumhirizhonga inozara iyo kushomeka kumwe chete kwakakonzera uye mukurasikirwa kwemitengo chigadzirwa cheumwechete kuora kwehukama.
Iyo nyaya inotanga nekutambudza kunorarama protagonist, mushure mekutiza kwakawanda, bani rinotorwa risingapfuurike. Iye, achizviona achiri mupenyu, anofunga kutarisana nenzvimbo yakaoma, uye munzira yake anosangana nemufudzi wembudzi uyo anochinja rombo rake nehupenyu hwake zvachose.
Jesús Carrasco (Badajoz, 1972) munyori akakwanisa kuzvisimbisa mune yekunyora pasi rese mukutanga kwake na Outdoor (2013). VeMadrid Booksellers Guild havana kupotsa basa, ndokuripa iro Bhuku reGore Mubairo, tisingatauri nezvePrx Ulysse yeiyo Best First Novel uye mimwe mibairo mizhinji. Parizvino munyori ari kugara muSeville, kwaanoenderera nebasa rake.
Pabutiro munyoro: Mapeji 224
Editor: Planet (Gumiguru 29, 2019)
Unganidzo: NF Novel
Unogona kuitenga pano: Outdoor
Iyo nyonganiso yaunosiya naCarlos Montero: 2016 Chitubu Novel Mubairo
Iyi nyaya inotipinza mubhutsu dzaRaquel, mukadziwo zvake, mudzidzisi wemabhuku, uyo anofanirwa kubva kubasa kwake kuenda kuOurense kuvhara kusavapo kwewaanoshanda naye. Iye anoenda nemurume wake, uyo, zvinonzwisisika, anobva kunzvimbo iyoyo.
Zvese zvinhu zvakajairika, kusvikira iye munhu waaifanirwa kutsiva awanikwa asina hupenyu. Zvese zvinoratidza kuti kuzviuraya, asi Raquel anokahadzika. Pamusoro peizvozvo, vadzidzi vanotanga kumunetsa, uye protagonist anotanga kugamuchira mameseji. Zvese zvinhu zvinoumba mhepo inonamira uye inofungira inoita kuti bvudzi rimire.
Tiri kutarisana neimwe yeakanakisa matsotsi enhau enguva dzichangopfuura.
Carlos Montero (Orense, 1972) ndiye munyori anoshamisa wechiSpanish, zvakare munyori wenguva zhinji. Ane degree reruzivo ruzivo kubva kuUCM. Iye anozivikanwa nebasa rake mumativi maviri ataurwa pamusoro, zvisinei, iye achangobva kuita debut semutungamiriri na Mari iri nyore.
Mabasa ake semunyori anosanganisira Genesisi, Nzira yekurarama, uye chimwe chezvisikwa zvake zvikuru Fizikisi uye kemisitiri. Ne Dambudziko raunosiya Iye akakonzera kukanganisa kusingaite kune vaverengi vake, vasingamire kuita ongororo pawebhu maererano nebasa.
Chimiro: Rudzi rwemhando
Saizi yefaira: 796 KB
Dhinda urefu: 398
Editor: Espasa (Kurume 22, 2016)
Kutengeswa na: Amazon Media EU S.à rl
Inogona kutengwa pano: Iyo nyonganiso yaunosiya
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Mabhuku akanakisa ekupa Kisimusi ino
Mabhuku aMarta Robles
Kisimusi. 3 Classics: iyo Grinch, musikana anoenderana uye Mr. Scrooge